Nduzi nke Ahịa iji Buru Onye Ntụkwasị Obi ™ Pro | Martech Zone
Afọ abụọ gara aga ewetawo ọtụtụ mgbanwe na ahịa. Anyị ahụla isi na-agagharị na mkpanaka, draịvụ ọhụrụ maka ike ọdịnaya na a alụmdi na nwunye n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na azụmahịa. Mana otu n’ime ihe kachasị mepụta ngwa ngwa ala dị na oghere SEO.
Na 2013, John Mueller mara ọkwa na Google agakwaghị na-emelite PageRank (Peeji Ngwaọrụ), ya usoro maka ogo Web peeji nke dabere na uru. Ma ọ bụghị. Kama nke ahụ, anyị nwere onye ọhụụ ọhụrụ na obodo: ntụkwasị obi ™.
Kere site Ebube di nma, ntụkwasị obi na-asọbaBụ metrik ọhụrụ na-ekpebi ogo saịtị dabere na njikọ ya na saịtị ndị ọzọ na ntanetị ya, ma ọ bụ nke aka ọrụ ya. Nkọwawanye a na njikọta dị elu na ọkwa dị elu bụ ihe dị mkpa n'ịmepụta gburugburu ebe ọchụchọ bara uru Google na-ele anya maka Intaneti oge a.
Ihe Nlereanya nke Ebe di nma na ntukwasi obi
Mgbanwe ndị a, n'ozuzu, dị mma maka ụlọ ọrụ anyị. Nke mbu, ha na - eme anyi ka anyi kpochapu na omume ulo akwukwo nke isi okwu - karie, jiri webpage jiri isi okwu ma obu onu ogugu mee ihe iji gbalita ichota saịtị na nsonaazụ ọchụchọ Google. Nke abuo, odida ala-adighi otutu ebe amuputara site na ntukwasi obi ™ bu onye eji elebanye anya, n'ikpeazu na ndi ahia inweta ihe ha choro site na ahia ahia gi.
O doro anya na, ntụkwasị obi na-asọ asọ ™ bụ usoro kwesịrị ekwesị. Ma, olee otu ị ga - esi tinye ya maka gị na usoro akara gị? Iji nyere aka, anyị mepụtara onye na-ere ahịa ngwa ngwa a, mezue ya na ndụmọdụ ise dị mfe iji kwado gị na ịgagharị ọhụụ ọhụrụ SEO, yana ijide n'aka na weebụsaịtị gị na-ejikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ dị mma dijitalụ.
Ndụmọdụ 1: Mee atụmatụ gị na ntọala nke okike, ọdịnaya ọdịnala.
Anyị niile maara na ịmepụta ọdịnaya mgbe niile dị elu na ndepụta Google chọrọ, mana ịmepụta ọdịnaya dị mkpa na nke dị mkpa ka mkpa.
Site na imepụta ọdịnaya maka ahịa gị (yabụ, izi ozi dị na isiokwu ma dị mkpa maka mkpa ha), ndị ọrụ dị mkpa ga-aga na saịtị gị, ị ga-enwe ọfụma ikike akara n'isi isiokwu a na-ekwu. The elu gị ntụkwasị obi eruba ™ (ma ọ bụ backlinking àgwà), mma ị ga-ọkwá na Google. Na isi, nke a bụ ụzọ Google iji nyochaa isi mmalite ndị ọkachamara wee debe ha nso na nyocha ọchụchọ maka ndị na-agụ ya ịchọta.
Mepụta ọdịnaya ọhụrụ, nke na-enye nkọwa nke ukwuu, ị ga-enwetakwa ikike backlinks ikike. Akwụkwọ ndị ọbịa bụ otu ezigbo ihe atụ nke otu esi arụ ọrụ. Ọ bụ usoro nhazi nke na-ewe oge na atụmatụ, mana ọ na-ewukwasị ntọala siri ike maka akara gị ma ọ kwesịrị mgbalị ahụ.
Ndụmọdụ 2: Omume ọma isiokwu ojiji.
Mgbe ịgbanweela na ọdịnaya ọdịnaya na backlinking, ụfọdụ ndị na-ere ahịa kwupụtara na mkpụrụ okwu nwụrụ anwụ. Mana n'eziokwu, ọ dị mkpa ugbu a karịa ka ị na-eme ezigbo isiokwu ojiji - iji okwu dabara na niche gị na ndị na-ege gị ntị.
Ọ bụrụ n 'ị na-agbachapụ atụmatụ mbụ gị SEO SEO, bido na ọkwa ọla edo. Google Mgbasa ozi na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nyere gị aka ịchọta isiokwu kachasị kachasị mma, na iweta kachasị mma na-eduga. Ikpokọta ya na a data njide ihe ngwọta, na ị gaghị enwe naanị data dị ike na atụmanya gị n'aka gị - ị ga - amata ihe na - ewetara ha na webụsaịtị gị.
Ndụmọdụ 3: Nọgide na-agbaso iwu a nwalere ma bụrụ eziokwu mgbe a bịara na mkpado meta, nkọwa na ngwa ngwa ngwa ngwa.
Iwu ochie nke mkpado meta, nkọwa na ngwa ngwa ngwa ngwa ka na-ebu ibu. Nkọwapụta na aha njirimara na-ewulite ogo saịtị yana ikike yana mkpa dịnụ, nke na-eme ka ntụkwasị obi ntụkwasị obi ka mma ™.
Ndụmọdụ 4: Mee ka ọ dị mfe maka ndị ọrụ gị ịchọta ihe ha chọrọ.
Mepụta ihe ederede na saịtị gị nke na-enye ndị ọrụ ohere ịchọta ozi ma ọ bụ obere ngalaba dị mfe. Ọ bụghị naanị na nke a tactic ike visual mmasị - ọ ga-eme ka mmekọrịta na ibelata ibiaghachi ọnụego, isi ihe na-ekpebi n'ozuzu Nde Nde Flow Flow.
Ndụmọdụ 5: Nọgide na-atụle n'usoro ihe omume gị.
Dị ka ndị na-ere ahịa, mmụba bụ isi ihe na-egosi ihe ịga nke ọma anyị - na nke kachasị mkpa, na-emegharị mbọ anyị n'ọdịnihu. Dị ka PageRank, ịtụkwasị ntụkwasị obi ™ nwere ike ịlele. Gbalịa nhọrọ ntụkwasị obi a na-akwụghị ụgwọ ọ bụla ™ nsuso, gụnyere mgbakwunye maka Google Chrome na Firefox, na weebụsaịtị SEO Checker's Ntughari Ntughari na Ntụkwasị Obi Flow Checker.
Tags: Njikọ njikọnjikọebube seontụkwasị obi na-asọba